Aya ndiwo marongero matsva eFace ID kuvhura iyo iPhone X | IPhone nhau
Chekutanga by @talkaboutdesign
Kutenda kune yeGold Master Master vhezheni yeIOs 11 isu tave kutoda kuziva zvese nezve inotevera iPhone X, kunyangwe tichine zvakawanda zvekuona, nekuti Kunyangwe iwo maratidziro akatove akanyorwa kare mundangariro medu, hatisati taona chishandiso chiri kushanda parizvino. Kuvhura kumeso, iyo 3D kamera, mashandiro matsva… isu tese tine izvo zvekuzviona zvichiita, kunyangwe pano isu tine tudyo tudiki.
Kuvhura kumeso, Chiso ID, ichave nyenyedzi huru yeiyo nyowani iPhone X, uye nekutenda kuna Guilherme Rambo isu tinogona kuziva kuti ichagadziriswa sei mune iyo nyowani iPhone uye kuti ichashanda sei kuvhura iyo kifaa. Kuvhura iPhone yedu nechiso chedu kunenge kuri kutoitika neiyi new terminal iyo Apple ichaunza kwatiri uye isu tinogona kuona kuti pazasi sei.
Guilherme Rambo Chekutanga
Iyo Face ID yekugadziriswa ichaitwa nenzira yakafanana kune izvo isu zvatajaira kushandisa neTouch ID. Kubva pazvigadziriso zvemidziyo tinogona kuita iyo iPhone kubata nemusoro kumeso kwedu, uko zvichave zvakakosha kuti isu tifambise musoro wedu kutora akasiyana profiles uye ruzivo rwayo, uye nekudaro tigoita 3D modhi inova iyo inoshandiswa kuzarura mudziyo. Mukushaikwa kwekusimbiswa, zvinoita sekunge pikicha yakapusa haizobatsire kuvhura iyo iPhone.
Kuti tiizarure, isu tichafanirwa kuisa kumeso kwedu mukati mebhokisi nechiso chinonyemwerera, uye kana iko kuvhura kwabudirira, hupenyu hunotiyeuchidza nezveSiri nyowani huchaonekwa muhondo uchitibvumidza kushandisa chishandiso. Uku kuvhura hakusi chaizvo izvo chimbo chekupedzisira chichava nacho, sezvo iri yehupenyu inoitika mukati mekugadzirisa maitiro. Rangarira kuti ibasa rakasarudzika reiyo iPhone X uye kuti uyu mugadziri akangokwanisa kuyedza pane 7 Plus.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Aya ndiwo marongero matsva eFace ID kuvhura iyo iPhone X